अय्यूब9ERV-NE - अय्यूबले - Bible Gateway
अय्यूब9Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
अय्यूबले बिल्ददलाई जवाफ दिन्छन्
9 तब अय्यूबले जवाफ दिए,
2 “हो, म जान्दछु तिमीले जे कुरा भन्छौ त्यो सत्य हो।
तर कसरी मानिसले परमेश्वरलाई तर्कमा पराजित गराउनु सक्छ?
3 एक मानिसले परमेश्वरसँग तर्क गर्न सक्तैन। परमेश्वरले 1,000 प्रश्नहरू सोध्न सक्नु हुनेछ
तर त्यो मानिसले एउटा मात्रको पनि जवाफ दिन सक्ने छैन।
4 परमेश्वर महाज्ञानी हुनुहुन्छ, अनि उहाँको शक्ति महान छ।
परमेश्वरसँग लडाई गर्ने कसैले पनि चोट पाउन सक्छ।
6 परमेश्वरले पृथ्वी थर्काउनलाई भुईंचालो पठाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले पृथ्वीको मूलाधार हल्लाई दिनुहुन्छ।
7 परमेश्वर घामसँग बोल्न सक्नु हुन्छ अनि यसलाई उदाउन दिनुहुन्न।
उहाँले ताराहरूलाई बन्द गर्न सक्नु हुन्छ।
यसकारण तिनीहरू चम्कन सक्तैनन्।
8 परमेश्वर एक्लैले आकाशहरू बनाउँनुभयो।
उहाँ समुद्री छालहरूमा हिंडनुहुन्छ।
9 “परमेश्वरले सप्त-ऋषि, मृगशिरा अनि किर्किटि ताराहरू बनाउँनुभयो।
उहाँले दक्षिणी तारागण बनाउनु भयो।
10 परमेश्वरले महान कर्महरू गर्नुहुन्छ जुन मानिसहरूले बुझ्न सक्तैनन्।
परमेश्वरका चमत्कारहरूको कुनै अन्त हुँदैन।
11 जब परमेश्वर मदेखि जानुहुन्छ, म उहाँलाई देख्न सक्तिन।
जब परमेश्वर मेरै छेउबाट जानु हुन्छ म उहाँलाई देख्दिन।
12 यदि परमेश्वरले केही थोक लगेर जानु भयो भने
कसैले उहाँलाई रोक्न सक्दैन।
कसैले पनि उहाँलाई केही भन्न सक्तैनन्,
‘तपाईं के गरिरहनु भएको छ?’
13 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध फर्काउनु हुन्न।
रहाबको सहयोगीहरूले परमेश्वरको डर माने।
14 यसैले म परमेश्वरसँग तर्क गर्न सक्तिनँ।
उहाँलाई मैले के भन्नुपर्छ म जान्दिनँ।
15 म निर्दोष छु तर म उहाँलाई जवाफ दिन सक्तिनँ।
म उहाँको दयाका निम्ति मात्र याचना गर्न सक्छु।
16 मैले बोलाउँदा उहाँले जवाफ दिनुभयो,
म अझ विश्वास गर्ने छैन कि उहाँले साँचि नै मलाई सुन्नु भएकोछ।
17 परमेश्वरले मात्र मलाई मिच्न आँधी पठाउनु भयो।
उहाँले कुनै कारणै बिना मलाई ज्यादा घाउ र चोटहरू दिनुभयो।
18 परमेश्वरले फेरि मलाई सास फेर्न दिनुहुने छैन।
उहाँले खाली मलाई ज्यादा दुःखहरू मात्र दिनुहुन्छ।
19 म परमेश्वरलाई पराजित गर्न सक्तिनँ।
परमेश्वर अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ।
म परमेश्वरलाई न्यायलयमा लैजान सक्तिनँ!
अनि ममाथि निष्पक्ष हुनुहोस् भनेर जिद्दी गर्न सक्तिनँ।
20 म निर्दोष छु, तर मैले भनेका कुराहरूले मलाई दोषी बनाए जस्तो लाग्छ।
म निर्दोष छु, तर यदि म बोलें भने मेरो मुखले मलाई नै दोषी प्रमाणगर्छ।
21 म निर्दोष छु तर म जान्दिन के सोच्ने।
म आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छु।
22 म आफैंलाई भन्छु, ‘त्यस्तै कुराहरू सबैमाथि घटिरहन्छन्।
निर्दोष मानिसहरू दोषी झैं मर्छन्। परमेश्वरले सबैको जीवनलाई समाप्त गर्नुहुन्छ।’
24 जब एकजना दुष्ट मानिस एउटा देशको शासक हुन्छ तब के परमेश्वरले आफ्नो नायकलाई त्यहाँ के भएको छ हेर्न पठाउनुहुन्छ?
यदि त्यो सत्य हो भने परमेश्वर चाँहि को हुन् त?
25 “दगुर्ने भन्दा पनि मेरो दिनहरू चाँडो भाग्दछ मेरा दिनहरू उडी जाँदैछ
अनि त्यहाँ तिनीहरूमा कुनै खुशीयाली नै छैन।
26 मेरा दिनहरू डुङ्गा जस्तै छिटो बग्छन्।
मेरो दिनहरू चीलले आफ्नो शिकारमाथि बेगले झम्टे झैं चाँडो बित्छ।
27 “यदि म भन्छु ‘म गुनासो गर्ने छैन
म आफ्ना पीडाहरू भुल्छु, म मेरो अनुहारमा मुस्कानले भर्छु।’
28 म मेरा पीडाले अझै भयभीत छु।
म जान्दछु तिमीले मलाई निर्दोष मान्ने छैनौ।
29 यदि म दोषी ठहरी सकेको छु भने
आफ्नो परीक्षा किन गरिरहने।
म भन्छु, ‘यो भुलिदेऊ।’
30 यदि मैले स्वयंलाई हिऊँले धोएँ भने,
अनि साबूनले हातहरू सफा राखें भने पनि,
31 परमेश्वरले मलाई हिलो भएको खाडलमा धकेल्नु हुन्छ।
तब मेरो लुगाहरूले पनि मलाई घृणा गर्नेछन्।
32 परमेश्वर म जस्तो मानिस हुनुहुन्न यसकारणले गर्दा म उहाँलाई जवाफ दिन सक्तिनँ।
हामी न्यायलयमा एकार्काले भेट गर्न सक्तैनौ।
33 म चाहन्छु कि त्यहाँ दुवै पक्षहरूलाई सुनिदिने कोही रहोस्।
म चाहन्छु कि त्यहाँ दुवै पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा न्याय गर्ने कोही होस्।
34 म चाहन्छु कि परमेश्वरले लिने डण्डा लगिदिने त्यहाँ कोही होस्।
तब परमेश्वरले मलाई एकदमै भयभीत पार्नु हुने छैन।
35 तब परमेश्वरको भयबाट स्वतन्त्र भएर
मैले चाहेको कुरा म भन्न सक्थें।